BAOLINA KITRA-SEKSIONA TOAMASINA II : Voafidy fanindroany ho filoha i Rivo
Notanterahina ny sabotsy 11 novambra lasa teo ny fifidianana izay ho filohan’ny seksiona Toamasina I ho an’ny taranja baolina kitra. 13 novembre 2017
Fifidianana izay notanterahina tao amin’ny biraom-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena Atsinanana.
Roa ny kandidà mpifaninana dia i Miadanarivo Razanamalala izay efa filoha teo aloha sy Andriamirado Emile. Raha ny fanazavana voaray, dia dimy ireo nametraka filatsahan-kofidiana fa ny roa ihany no voatazona. Ny telo kosa tsy nahafeno ny fepetra ka tsy nankatoavin’ny kaomisiona misahana ny fifidianana ny filatsaham-kofidian’izy ireo. Klioba miisa 9 no nandray anjara tamin’ny fifidianana. Nazava ny fandresen’i Miadanarivo Razanamalala izay fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Rivo. Isa 7 amin’ny 9 no azony. Mpifidy iray no nanao vato maty. Izany hoe vato iray monja no azon’ny mpifaninana taminy.
Raha ny zava-misy, dia nafana ny fifamaliana am-bava nandritra ny fifidianana. Samy tonga teny amin’ny biraom-pifidianana ny ekipan’i Gérard Joël Patrick sy ny ankilany, ekipan’ny filohan’ny ligin’ny baolina kitra Atsinanana. Ny ekipan’i Gérard Joël Patrick izay nanakiana fatratra ny fomba fiasan’ny ligin’Atsinanana tato ho ato, indrindra mahakasika ny fikarakarana fifidianana filohan’ny seksiona. Nisy ny fanatanterahana valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety misesisesy. Etsy ankilany, ny filohan’ny ligin’Atsinanana, dia manamafy fa tsy misy idiran’ny ligy velively ny fikarakarana fifidianana.
Na dia teo kosa izany rehetra izany, dia tontosa antsakany sy andavany ny fifidianana izay ho filohan’ny seksiona Toamasina I. Mbola nametrahan’ny mpitia baolina kitra eto Toamasina I ny fitokisana hitantana ny seksiona indray araka izany i Miadanarivo Razanamalala.